Naya Bikalpa | बामदेवको सांसद हुँदै प्रधानमन्त्री हुने सपना पूरा होला ? - Naya Bikalpa बामदेवको सांसद हुँदै प्रधानमन्त्री हुने सपना पूरा होला ? - Naya Bikalpa
बामदेवको सांसद हुँदै प्रधानमन्त्री हुने सपना पूरा होला ?
प्रकाशित मिती: २०७५ भाद्र ११, ०९: १५: १०
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्र्टीभित्र वामदेव गौतमलाई सांसद बनाउने विषयमा भएको बहस यतिबेला चर्चा र आशंका दुवै दृष्टिले अघि आएको छ । बर्दिया क्षेत्र नं एकमा कांग्रेसका सांसद संजय गौतमसँग पराजित गौतमले डोल्पाका सांसदलाई राजिनामा दिन लगाएर आफू त्यहीँबाट सांसद बन्ने सपना देख्दैछन् ।
आफू किन सांसद बन्नुप¥यो भन्ने सम्बन्धमा गैतम आफैले नेकपाको सचिवालय बैठकमा एक घण्टा मन्तव्य राखेको नेकपाका नेताहरु बताउँछन् । गौतमको यस्तो आफ्नै प्रस्तावलाई महासचिव विष्णु पौडेल र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समर्थन गरेका थिए । अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पक्ष र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने गौतमको उक्त प्रस्तावको विपक्षमा धारणा राखेका थिए । सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ भने गौतमलाई सांसद बनाउने पक्षमा नरहेको बताएका थिए ।
डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढाले आफूले राजिनामा दिएर गौतमलाई निर्वाचन क्षेत्र खाली गर्ने बताइ सकेका छन् । तर, यस्तो प्रस्ताव राख्ने उनी पहिलो नेता भने होइनन्। पूर्वी रुकुमबाट चुनाव जितेकी पूर्व माओवादी नेता कमला रोक्काले पनि गौतमका लागि आफूले राजिनामा दिने घोषणा गरेकी थिइन् । दैलेखका सांसद रविन्द्र शर्माले पनि गौतमलाई सासद बनाउन आफूले राजिनामा दिने बताएका थिए ।
१५ भदौमा राजिनामा घोषणा गरेका बुढाका छोरा यार्साको कारोबारी हुन् । उनको कारोबारमा १५ प्रतिशत गौतम परिवारको सेयर रहेको स्रोतको दाबी छ । बुढा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा मनोनित जिल्ला सभापति हुन् । डोल्पामा हुने स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरका पूर्वाधार निर्माण सबै बुढाको निर्माण कम्पनीमार्फत हुने गरेको छ । ५१ सदस्यीय स्थायी समितिमा वामदेव गौतमलाई सांसद बनाउने प्रस्ताव पारित सजिलै पारित हुने सम्भावना छैन । पार्टी भित्रको ठूलो हिस्सा यस्तो निर्णयबाट असन्तुष्ट बन्ने सम्भावना छ ।
किन बन्नु प¥यो गौतमलाई सांसद ?
नेता गौतम अहिले आफूलाई सांसद बनाउन पार्टीभित्र सहमति जुटाउने ‘लबिङ’मा छन् । यस विषयमा उनले पार्र्टी अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड, महासचिव पौडेल र वरिष्ठ नेता नेपालसँग छलफल गरिसकेको स्रोतले जनाएको छ । तर, गौतम भड्किने डरले उनको प्रस्तावको कसैले पनि विरोध गरेका छैनन् । गौतमले आफूले चुनावका कारण घर बिक्री गरेको र अझै तीन करोड रुपैयाँ ऋण भएको बताउँदै आएका छन् । सोही कारण उनी दुई महिना भए पनि प्रधानमन्त्री भएर कमाउन चाहन्छन । त्यसैका लागि उनी सांसद बनेर प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन ।
गौतमको राजनीति धरापमा
डोल्पामा सांसद बुढाले ६ हजार मतान्तरले चुनाव जितेका हुन् । नेतृत्वले उनलाई राजिनामा गराएर गौतमलाई त्यहाँबाट चुनाव लडाउने औपचारिक निर्णय गरेको छैन । यसका लागि स्थायी समितिको निर्णय आवश्यक हुन्छ । ५१ सदस्यीय स्थायी समितिमा यो प्रस्ताव पारित सजिलै पारित हुने सम्भावना छैन । प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा पनि उनलाई जिताउन कठिन हुने देखिन्छ । पार्टीभित्रको ठूलो हिस्सा यस्तो निर्णय गरेको खण्डमा असन्तुष्ट बन्ने सम्भावना छ ।
अहिले पार्टीभित्र गौतमलाई किन सांसद बनाउने भनेर औचित्य पुष्टि गर्ने उचित तर्क पनि देखिँदैन। नेकपामा स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाहरूलाई प्रदेश र संघमा उम्मेदवार नबनाउने मापदण्ड थियो। सोहीअनुसार व्यवहारमा कार्यान्वयन पनि भयो। तर, चुनावमा उठेर पराजित भएका गौतमलाई सांसद बनाउन किन यो जोखिम मोल्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
गौतमको विगतका गतिविधिलाई कार्यकर्ताले मूल्यांकन गर्दा त्यति सन्तुष्ट भएको पाइँदैन। आफ्नै राजकीय शैली र भड्किलो गतिविधिका कारण उनले बर्दियाबाट चुनाव हारेको स्थानीय कार्यकर्ताहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । डोल्पामा चुनाव लडेको खण्डमा कार्यकर्ताहरूले यो निष्कर्षलाई आधार बनाउनेछन् । फेरि डोल्पामा किन दोहो¥याएर चुनाव गर्नुपरेको भन्ने सही तर्क दिने ठाउँसमेत रहँदैन ।
सुरक्षित क्षेत्र भनेर काठमाडौं–२ बाट माधवकुमार नेपालले राजिनामा गरेर कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई ०७० सालमा चुनाव लडाउँदा मतदाताले मज्जाले पछारिदिएका थिए । नेतृत्वको मनपरितन्त्रलाई त्यो एउटा गतिलो झापड थियो । उक्त क्षेत्र फिर्ता लिन पछि नेपाललाई धौ धौ परेको थियो ।
डोल्पामा गएर गौतमले चुनाव जिते भने ठीकै होला तर जितको कुनै ग्यारेन्टी नहुने विगतका घटनाले बताउँछन् । गोप्य मतदानमा जनताले आफ्नो मत प्रकट गर्ने हो । त्यो बाकस खोलेर गणना नगरेसम्म कसले जित्छ भन्न सकिँदैन। डोल्पामा गौतम चुनाव लडेर पराजित भए भने संसदमा नेकपाको एक सिट त घट्छ नै तर त्यससँगै गौतमको राजनीति पनि समाप्त हुनेछ ।
२०७५ भाद्र ११, ०९: १५: १०